Hambalyo Xcel Energy 25 sano oo tabarucnimo ah - Cunnooyinka ku socda wheels
Waxaan ugu hambalyeynayaa Xcel Energy 25 sano oo iskaa wax u qabso ah
Abriil waa Bil Tabarrucayaasha Qaranka, waxaanan fursadda uga faa'iideysaneynaa inaan u mahadcelino dhammaan Cunnooyinka iskaa wax u qabso ku shaqeeya ee mutadawiciinta ah ee ka dhigaya keenista in ka badan 1 milyan oo cunto sanadkiiba mid suurtagal ah. Waxay sidoo kale dhacdaa in mid ka mid ah bixiyeyaasha ugu muddada-dheer ee mutadawiciinta barnaamijyada Cunnada ee Wheels ay u dabaaldegayaan 25 sano oo tabaruc ah.
Xcel Energy waxay leedahay taariikh dheer oo taakuleyn ah oo loogu talagalay Cuntooyinka Lugaha Lugta, iyadoo shaqaaluhuna ay ka caawinayaan awoodo kala duwan rubuc-qarnigii la soo dhaafay. Lambarada ayaa sheekada si fiican u sheegaya:
500 mutadawiciin cunno geeyay ama ka qayb qaatay waxqabad kale oo iskaa wax u qabso ah
135,000 saacado mutadawiciin ah oo ay ku deeqeen shaqaalaha Xcel
525,000 cuntada ay bixiyeen mutadawiciinta Xcel
Kooxaha Bixinta Goobta Shaqada sida kuwa ay maamulaan mutadawiciinta Xcel waxay gacan weyn ka geystaan xoogga mutadawiciinta ee barnaamijyada Cunnada ee Wheels. Kooxo la mid ah kooda ayaa awood u leh inay daboolaan dhamaan marinnada cuntada ee maalin kasta, iyagoo siinaya hubaal dheeraad ah inay jiri doonaan mutadawiciin ku filan oo daboolaya dhammaan isbeddelada loo baahan yahay si loogu adeego in ka badan 4,000 qof oo qaata maalintii.
Tabaruceyaasha Xcel sidoo kale waxay ku lug leeyihiin wax ka badan kaliya bixinta cuntada. Shirkaddu waxay si joogto ah ugu dirtaa mutadawiciin si ay uga caawiyaan sannadle-sannadeedkeena Blizzard Box Blitz oo badiyaa martigaliya dhacdooyinka u gaarka ah si ay uga faa'iideystaan oo ay kor ugu qaadaan wacyiga ku saabsan Cuntooyinka Lugaha Lugta.
"Waxaan dhihi karnaa maalin kasta, qof ka socda Xcel Energy ayaa caawinaya qof waayeel ah ama qof naafo ah oo gurigiisa jooga," ayuu yiri Patrick Rowan, oo ah agaasimaha fulinta ee metals on Wheels. 25-kii sano ee la soo dhaafay, mutadawiciinta Xcel Energy waxay gaarsiiyeen kumanaan raashin ah, halka shaqaalihii hore iyo kuwii hore ee Xcel ay gacan ka geysteen qaabeynta Cunnada Wheels iyagoo u adeegaya guddiyada iyo guddiyada qorsheynta. Aad ayaan ugu mahadnaqaynaa taageerada hagar la’aanta ah ee tabaruceyaasha Xcel Energy! ”
Abriil 10, 2014